विज्ञापन बोर्डद्वारा विज्ञापन आचार संहिता २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक। - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार विज्ञापन बोर्डद्वारा विज्ञापन आचार संहिता २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक।
विज्ञापन बोर्डद्वारा विज्ञापन आचार संहिता २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक।
काठमाडौं:= विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन आचार संहिता २०७८ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विज्ञापन बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रमका बीच उक्त आचारसंहिता सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आचारसंहिताको मस्यौदामाथि एक महिनासम्म सरोकारवालाको राय प्रतिक्रिया लिई अन्तिम रुप दिने तयारी बोर्डले गरेको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ जारी गरिएको दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन दिवसको अवसर पारेर कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सबैलाई आ-आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले समृद्धिको दिशामा सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट अघि बढ्न सके १० वर्षभित्रमा दक्षिण एसियामा नेपाल पनि एक सम्पन्न मुलुक बन्ने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री कार्कीले समाजका अरू क्षेत्रलाई पनि उदाहरणीय बन्ने गरेर मुलुकको समृद्धिको अभियानमा जुट्न विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाहरूलाई सचेत गराउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहिताको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सुझाव दिएर यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सरोकारवाला सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले विज्ञापन बोर्डप्रति लक्षित गर्दै हरेकले आफँैले आफैँलाई अनुशासित बनाएर जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुपर्ने आवश्यकतासमेत औंल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा मिडिया अलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले मिडियाहरूमा अवैध रूपमा भइरहेको विज्ञापन रोकेर एकद्वारा प्रणाली जारी गर्न बोर्डको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जालमा छापिएका विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले वार्षिक रूपमा सञ्चारमाध्यममा छापिएका विज्ञापनको २० प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यमले पाउने हुँदा हराएको ८० प्रतिशत रकमको समेत अबका दिनमा हिसाब हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र र सरकारले मनाउने विज्ञापन दिवस एउटै हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञापन कुनै चन्दा, दान, दक्षिणा नभएको उल्लेख गर्दै टीआरपी बढी हुनेले पाउने र समानुपातिक रुपमा बाँड्नु नपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले स्टेक होल्डरहरूको हकहीत सुरक्षित हुनेगरी विज्ञापन बजार बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । विज्ञापनमा केही विकृतिहरू केही व्यवसायीका कारण पनि भएको बताउँदै अध्यक्ष धितालले एजेन्सीहरूलाई मात्रै दलालको संज्ञा दिन नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यम बलियो बनाउन सके मात्रै सम्पादकीय स्वतन्त्रता सबल हुने भन्दै विज्ञापन दिए राम्रो र नदिए नराम्रो भन्ने परिपाटी अन्त्य गर्न राज्यले विज्ञापन बजारलाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोसल मिडियालाई व्यवस्थित बनाउन र करको दायरामा ल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मिडियाले विज्ञापन पाउन कन्टेन्ट राम्रो हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले विज्ञापन मिडियाको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विज्ञापन मिडियाको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित नगरेसम्म विज्ञापन र मिडिया सन्दर्भ, सम्बन्ध सही ढंगले परिमार्जित गरेको नठहरिने तर्क गर्नुभयो ।
दुई चरणमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको सहजीकरण विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले गर्नुभएको थियो । अर्को वर्ष विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विज्ञापन बोर्डले भविष्यमा विज्ञापन व्यवसायलाई सम्मानित व्यवसायको रुपमा स्थापित गराउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको दोस्रोे सेसनमा आनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदीप थापा, मिडिया अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठ, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, भोजराज अर्याललगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले बोर्डले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिताप्रति सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा विज्ञापन व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले विज्ञापनको बजार बिस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीहरूले विज्ञापनको बजारलाई बढाउन सकेमात्रै नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले निष्पक्ष रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था हुने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका सदस्यद्वय स्व. महेन्द्र शेरचन तथा स्व. चन्द्रप्रसाद न्यौपानेको शोकमा एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो ।
अघिल्लो लेख कांग्रेसको महाधिवेशन सार्ने नेतृत्व प्रयास, समितिले सभापतिसँग छलफल गर्दै।
पछिल्लो लेख ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त, होमस्टे उद्घाटनदेखि सडक, पुलसम्मको निरीक्षण।